“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၄)
“ချစ် သော ကေ”- အ ပိုင်း (၄)
Posted by aye.kk on Jul 9, 2012 in My Dear Diary |9comments
ရုပ် ရှင် အ ပြီး ၊ မီး လင်း သည့် အ ချိန် မှာ တော့ …..
အစ် ကို သု ခ မှ ကေ့ မျက် နှာ လေး အား ကြည့် ပြီး ၊ တော် သေး တယ် ….ပုံ ပျက် ပန်း ပျက် မ ဖြစ် တော့ လို့ နော်….။
ဟို မိန်း က လေး ဆို ၊ ကြည့် စမ်း ပါ ဦး လက် ကိုင် ပု ၀ါ နဲ့ မျက် နှာ ကွယ် ပြီး ထွက် လာ ရ တယ် ။
မိန်း က လေး များ က အ ငို လွယ် လိုက် တာ ၊ ရုပ် ရှင် ကြည့် ပြီး ဈာန် ၀င် သွား တယ် နဲ့ တူ တယ် ။ မိန်း က လေး တွေ နဲ့ လာ ပြီး ၊ လွမ်း အ ဆွေး ဇတ် ကား တွေ ကြည့် လို့က တော့ အ ဆင် ပြေ မယ့် ပုံ လုံး လုံး မ ပေါ် ဟု အစ် ကို သု ခ က သူ့ ၏ ထင် မြင် ချက် လေး အား ပြော ပြ ပါ သည်။
ရုပ် ရှင် ရုံ မှ ပြန် အ လာ တွင် ၊ ဗိုက် ဆာ သည် ဟု ဆို ကာ အစ် ကို ၀မ်း ကွဲ တော် သူ နှင့် ယောင်း မ တို့ မှ မြို့ ထဲ ရှိ ၊ ကြေး အိုး ဘု ရင် တွင် ၊ ကြေး အိုး လိုက် ကျွေး သ ဖြင့် ၊ စား ပြီး မှ သာ အိမ် ပြန် ရောက် ကြ ပါ သည် ။ အိမ် ရောက် ရောက် ခြင်း ပင် ၊ အ ဒေါ် က…..ကေ့ အား တယ် လီ ဖုန်း ကြေး နန်း လာ တယ် ။ အ ဖေ က မ နက် ဖန် ပြန် လာ ရ မယ် လို့ပြော တယ် ။
အ ဒေါ် ရေ ………ကောင်း ပါ တယ် ။ အ ဖေ က စိတ် ပူ တတ် တယ် ၊ အ ဖေ မ ပါ ရင် ဘယ် မှ လွတ် တာ မ ဟုတ် ဘူး ။ ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရား တ ပေါင်း ပွဲ တော် လ ပြည့် ဆီ မီး တစ် ထောင် ပူ ဇော် ပွဲ သွား ချင် လွန်း လို့မ နည်း ပူ ဆာ ထား လို့သာ လွှတ် တာ ။ ပြန် ဖို့အ တွက် က၊ သ္မီး အ ၀တ် အ စား တွေ သိမ်း ဆည်း ပြင် ထား လိုက် ပါ့ မယ် ။
အေ… အေ…၊ မ နက် ဖြန် စာ အ တွက် ဟင်း ချက် ဖို့ အ ဒေါ် (၃၈) လမ်း ဈေး ပြေး လိုက် ဦး မယ် ။
မောင် နှ မ နှစ် ယောက် ကောင်း ကောင်း နေ ခဲ့ ကြ နော် …ဟု မှာ ပြီး အ ဒေါ် က ဈေး သို့သွား လိုက် ပါ သည် ။ မ နေ့က ဗြောင်း ဆန် အောင် လိုက် တန်း ပြေး တန်း လုပ် ထား တာ အ ဒေါ် က ရိပ် မိ သွား ပုံ ရ ပါ သည် ။ အ င်္ကျီ တင် သည့် ကျိုး တန်း ပြတ် ထွက် သွား တာ အ ဒေါ်သိ သွား သည် ဟု အစ် ကို သု ခ က ၊ ကေ့ အား ပြန် ပြော ပြ ပါ သည် ။
ကေ ရေ…အ ၀တ် စား တွေ သိမ်း ပြီး ရင် ၊ အ ခန်း ထဲ အောင်း မ နေ နဲ့ နော် ၊ ထွက် လာ ခဲ့ နော် ၊ ပျင်း တယ်…. အ ပြင် မှာ ကိုယ် တို့စစ် တု ရင် ထိုင် ဆော့ ရ အောင် ဟု အ ဖော် ခေါ် ပါ သည် ။
သိမ်း ဆည်း ပြီး ၊ ထွက် လာ ခဲ့ ရင်း ၊ ကေ မှ အစ် ကို သု ခ အား…
ကြည့် ခဲ့ ကြ တာ က…..
ဂျ ပန် မှာ (၇) ည တာ …..
ကေ နဲ့ အစ် ကို သု ခ က…..
ရန် ကုန် မှာ (၃) ည တာ ၊ မှတ် မှတ် ရ ရ ပါ ဘဲ ။
မ နက် ဖန် ပြန် ရ မှာ ဆို တော့ လေ ၊ နောင် ဘယ် တော့ များ မှ ပြန် ဆုံ ဖြစ် မယ် မ သိ ဘူး နော် ။
အင်း….။ ကံ ကောင်း ချင် တော့ ဓါတ် ပုံ လေး တစ် ပုံ အ ပြင် ထွက် ကျ နေ လို့ တော် သေး သည် ။
အ မှတ် တ ရ လည်း ဖြစ် သွား သည် ။ လွမ်း ရင် ဓါတ် ပုံ လေး ထုတ် ကြည့် လို့ရ အောင် အိပ် ကဒ် ထဲ အ မြဲ ဆောင် ထား မှာ ဟု ကေ့ အား ပြော ပြီး ။ အိပ် ကဒ် ထဲ ထည့် ထား သည့် ကေ့ ပုံ အား ထုတ် ပြ ပြန် ပါ သည် ။
ခု မှ တွေ့ တာ ကို များ…၊ ဓါတ် ပုံ နောက် ကျော မှာ “ချစ် သော ကေ” လို့ ရေး ထား ရ သေး တယ် ။
အစ် ကို သု ခ က……
မိန်း က လေး တွေ မြင် မြင် ချင်း ချစ် တတ် တာ ပဲ လား ဟင် ။
ကေ့ ကို ချစ် ရင် တော့ သုံး နှစ် သုံး မိုး မှ အ တည် ပြု မှာ ၊ မ ယုံ မ ရှိ နဲ့ နော် ….ဟု စ နောက် ပြီး ပြော လိုက် မိ ပါ သည် ။
မြင် မြင် ချင်း ချစ် မိ တာ က……
ရှေး က ဖူး စာ ရေ စက် အ ကြောင်း ကံ ပါ ။
လှ တဲ့ မိန်း က လေး တိုင်း ကို ၊ တွေ့ တိုင်း လည်း ချစ် ဖို့ က မှ မ ဖြစ် နိုင် တာ ။
ရှင်း ပြ လို့ မ ယုံ ရင် လည်း ၊ သုံး နှစ် သုံး မိုး က နည်း သေး တယ် ။
က တိ စ ကား အ တည် ရ ထား လို့ က တော့ ၊ ဆယ် နှစ် ဆို လည်း စောင့် နိုင် တယ်….. ။
ကဲ ဘာ ဆက် ပြော ချင် သေး လည်း ကေ ဟု ဆို ပါ သည် ။
တော် ပြီ …တော် ပါ ပြီ ၊ အစ် ကို သု ခ နဲ့ က ၊ စ ကား စစ် မ ထိုး တော့ ပါ ဘူး ။ စစ် တု ရင် ဘဲ ထိုး တော့ မယ် နော် ။
ဒီ တစ် ခါ လောင်း ကြေး ဘာ ထပ် အုံး မှာ လည်း ။
အစ် ကို သု ခ ရှုံး ရင် တော့ အိပ် ကဒ် ထဲ က ၊ ကေ့ ဓါတ် ပုံ ပြန် ပေး ကြေး နော်….
ပိုင် ရှင် ခွင့် မ ပြု ပဲ ယူ ထား တာ ၊ လုံး ၀ ကျေ နပ် တာ မ ဟုတ် ဘူး ။ ဘယ် သူ့ ကို မှ လည်း မ ပေး ဖူး ဘူး ။
ပိုင် ရှင် ခွင့် မ ပြု ပဲ ယူ ထား ရင် င ရဲ ကြီး မှာ နော် ။
ကေ့ ထဲ က ယူ ထား တာ မှ မ ဟုတ် တာ ၊ အ ဒေါ် ဘီ ဒို ထဲ က လျှော ပြီး ထွက် ကျ လာ လို့ကောက် ယူ မိ ထား တာ ။
ဓါတ် ပုံ ကို မြင် မြင် ချင်း ပဲ ကိုယ် က ချစ် မိ တယ် ။
အ ရမ်း လှ လို့ လေ ၊ မျက် ခင်း တွေ ပေါ် မှာ က ချင် ၀တ် စုံ လေး နဲ့ ၀မ်း လျှား ထိုး ၊ မေး လေး ထောက် ပြီး မှောက် နေ ရက် ၊ ပါး လေး က လည်း ချိုင့် ၀င် အောင် ခွက် ပြီး ရယ် နေ သေး ။
ဒီ ဓါတ် ပုံ လေး က မြင် ရ သူ အ တွက် က …..
ရင် ထဲ တ ကယ် အေး မြ စေ တယ်…..။
ချစ် စ ရာ ကောင်း လွန်း လို့ ပါ ။
ဒီ ဓါတ် ပုံ ကို ယော က်ျား လေး တွေ မြင် လို့ က တော့ ၊ မ ချစ် ပဲ နှင့် တော် ယုံ ဘယ် သူ နေ နိုင် မှာ လည်း ပြော… ။ ကိုယ် က တော့ ဓါတ် ပုံ လေး ကို မြင် လိုက် ရ က တည်း က ကို ၊ ရင် ထဲ မှာ တ ကယ် ကို ချစ် မိ သွား ခဲ့ ရ ပြီ ကေ…. ။
နောက် ခံ လေ ယာဉ် ပျံ နေ တဲ့ ပုံ လေး ကို လည်း အ မိ အ ရ ဖမ်း ပြီး ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ က ရိုက် ယူ ထား နိုင် တာ ။
ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ ရိုက် ချက် က အ ရမ်း တော် ၊ အ ရမ်း မိုက် တာ ပဲ ။ အင် မ တန် တော် တဲ့ ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ ရဲ့ရ်ိုက် ချက် လက် ရာ လှ လှ တ ခု ဘဲ ။
ဒါ ဘယ် နေ ရာ မှာ ရိုက် ထား တာ ဆို တာ ကို လည်း ၊ ကိုယ် တ ကယ် သိ ချင် လိုက် တာ ….။ ဓါတ် ပုံ ရဲ့စာ တမ်း မှာ ပု သိမ် ၀င်း ချစ် ဓါတ် ပုံ တိုက် လို့ရေး ထား တာ တွေ့ ရ တယ် ။
အ ဆောက် အ ဦ ရှေ့ ၊ မျက် ခင်း တွေ ရှိ တဲ့ ကွင်း ပြင် ကျယ် ကြီး ကို နောက် ခံ ထား ပြီး ရိုက် ထား က ဘယ် နေ ရ မှာ လည်း ဆို တာ မှန်း ကြည့် မ ရ လို့ ၊ အ ရမ်း သိ ချင် မိ နေ မိ တာ ဟု ၊ ကေ့ အား နောက် တစ် ကြိမ် ထပ် မံ ပြော ပြန် သည် ။
ကာ ယ ကံ ရှင် ရဲ့ပုံ အ စစ် ဆို ရင် တော့ ပြော ပြ နိုင် ရ မယ် ။
ကေ အ ပြင် မှာ တွေ့ တဲ့ အ မူ အ ယာ မှာ က ၊ ယော က်ျား လေး စ တိုင် လို လို ၊ ဓါတ် ပုံ ထဲ က ပင် ကိုယ် မူ ရင်း မိန်း က လေး ဟန် ပန် ဆို တော့ ၊ ခန့် မှန်း လို့ မ ရ နိုင် တာ ၊ ထူး ဆန်း နေ သည် ဟု အစ် ကို သု ခ က ပြော ပါ သည် ။
ရှူံး ရင် ဓါတ် ပုံ ကိ စ္စ ပြော ပြ ကြေး နော် ။
လူ ကို ချစ် တာ မှ မ ဟု တ် တာ ၊ ဓါတ် ပုံ မြင် ပြီး ချစ် တော့ လည်း…
လူ ကို မှ မ ရ နိုင် ရင် တော့ ၊ ဓါတ် ပုံ ကို သာ ဖက် ပြီး ဘဲ အ ရိုး ထုတ် တော့ နော် ဟု ၊ ရယ် ရယ် မော မော နှင့် ပြော လိုက် မိ ပါ တော့ သည် ။
အောင်မငီး ရက်စက်လှချီလား… ကေလေးရဲ့။
အပြင်ဘက်က ကေ့ကိုလဲ သိပ်ချစ်မိသွားတာ တစ်ကယ်ပါ။
(အန်တီအေး ဇါတ်ထဲက ကိုသုခ နေရာတွင် ဝင်ခံစားမိခြင်း)
မဟုတ်ပါဘူး ဓါတ်ပုံထဲက ကေ့ကိုချစ်တာ
အပြင်ဘက်က ကေ့ကို တကယ်ချစ်တာမှမဟုတ်တာ
တကယ်ချစ်ရင် သုံးနှစ်သုံးမိုးစောင့် ဒါပဲ …….
ကေကလည်း ရင်ခုန်နေပါတယ်… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
မဂွတ် ထော် says:
ဓါတ်ပုံထဲက ကေ ကိုလှလို့ ကြိုက်မိပီး
အပြင်က မလှ ရင်တော့
တကယ်ချစ်၇င်တော့ လှ လှ မလှလှ ကြိုက်နိုင်ရမှာပေါ့လေ…ဟဲဟဲ
မအေးရဲ့ 7Nights in Japan နဲ့အပြိုင် 3Days in Yangon ကို ဖတ်ရှု့အားပေးသွားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံနဲ့ပဲ အမှန်တကယ် အရိုးထုတ်သွားသလားဆိုတာလည်း သိချင်သား
လှလို့ ချစ်တာမဟုတ် ချစ်လို့ လှတာပါ ကေရာ…:D..အမြဲအားပေးနေပါသည်…နောက်အပိုင်းတွေထပ်တင်ပေးပါ….
”ကိုသုခ” ကတော့ အရင် ”ဦး” ထက်တော့ ကံကောင်းရမယ် ထင်ပါတယ်…
”ကေ” က ”ကိုသုခ” အပေါ်မှာ ခဏလေးနဲ့ခင်မင်တယ်… လိုလားတယ်…
ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကလည်း ”ချစ်သော..ကေ” ဖြစ်နေတယ်…
”Happy Ending” လေးများ ဖြစ်နေမလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့မိပေမယ့်……
ဇာတ်လမ်းလေးက ကောင်းပါတယ်…ဒါပေမယ့်…. နှင်းနှင်းကတော့
“ဦးနဲ့သမီး” ဇာတ်လမ်းလေးကို ငြိနေဆဲပဲ….